Fashilka siyaasadeed ee Shariifka maxaa xiga?
Posted by admin on November 01 2011 19:59:48
HS:-Fashilka siyaasadeed ee Shariifka maxaa xiga, maxuuse yahay murtida ka danbeysa hadalada ay maanta ilaa shaleyto ku soo celcelinayaan C/wali Gaas iyo wasiirada la socda ee ah in heshiiska ay la galeen Kenya uu la ogyahay Shiikh Shariif? Wararka maanta Nov.1/2011
HS:-Fashilka siyaasadeed ee Shariifka maxaa xiga, maxuuse yahay murtida ka danbeysa hadalada ay maanta ilaa shaleyto ku soo celcelinayan C/wali Gaas iyo wasiirada la socda ee ah in heshiiska ay la galeen Kenya uu la ogyahay Shiikh Shariif?
Hadaan soo koobno nuxurka siyaasadeed ee Shariifka iyo fashilka ku dhacay waxey u muuqataa safarka Ugandha inuu yahay mid uu ku weydiisanayo dowladaasi magangalyo siyaasadeed kadib marka uu dhamaado waqtigiisa. warar xaqiiqda u dhaw ayaa sheegaya in maxkamada caalamiga ah ee Heyg amaba ICC ay ku dartay Shariifka shaqsiyaadka dalka Somaliya tacadiyadii ka dhacay wax laga weydiin doono kadib diidmadii uu kala horyimid ciidamadii Kenya oo hada u muuqata in afka loo galiyey heshiis qasab ah oo uusan wax ka qaban karin.
Labada dhinacba waa fashilan yahay Shariifka waa marka koobaade hadii uu ogolaado heshiiskan waxey ka dhigan tahay in aysan diidmadiisu awalba aheyn mid lagu bad badinayey Bada iyo Beriga Somaliya ee uun ka aheyd nin jeceleysi iyo naceyb ku qotomay beelo gaar ah oo Somaliyeed oo degan Jubooyinka siyaasiyiintooda.
Waa mida labaade hadii uu diidmadiisa sii wato dowlada Kenya oo hada u muuqata iney la wareegtay taageerada beesha caalamka oo xitaa Mahiga u sheegeen haduu dhiirageliyo hadalka Shariifka iney xafiiskiisa ka rarayaan dalkooda ayaa hada arintoodu u muuqataa sidey doonayeen dhib la,aan.
Dhinaca kale kalsooni daro weyn aya laga dareemayaa R/wasaare Gaas iyo waftigii heshiiska la soo galay Kenya oo 24tii saac ee inadhaaftay hadii la weydiiyo iyo hadii aan la weydiin ku soo celcelinayo Shariifkaa nala ogaa arintaan, waxey muujineysaa kalsooni daro bahsan oo ka jirta masuuliyiinta TFGta taasi oo fursad weyn siisay dowlada Kenya oo hada ciidamadeeda iyo kuwa Azania ku sii siqayaan magaalada Kismaayo halka ay kala jaren gurmadkii Shabaab ee ka iman jiray Jubada dhexe ilaa gobolka Bay.
Guud ahan markaad dhinackasta ka eegto siyaasada Shariifka iyo TFGda hada jirta waxey ka dhigan tahay iney noqonayaan hogamiyaashii ugu xumaa ee soo mara taariikhda umada Somaliyeed maadama ay maareyn waayeen amaba isku mid ka noqon waayeen soo gelitaankii ciidamada dowlada Kenya oo R/wasaaruhuna soo dhaweyey Shariifkana diidmo kala hor yimid.